Sahayda Soosaarayaasha & Alaab-qeybiyeyaasha - Warshad Sahayda Shiinaha
3 G 5 g 10 g 100 g silica jel galaal dahaaran oo dahaaran
Amaan sare iyo daxal la’aan. Ku habboon baakadka aan lahayn boodhka iyo kuwa aan guurto. Badeecaduhu waxay la kulmaan heerka milatariga Mareykanka ee mil-d-3464e, taas oo ah xulashada ugu habboon ee semiconductor iyo warshadaha microelectronics. Waa loo habeyn karaa iyadoo loo eegayo shuruudaha macaamiisha.
Filim xumbo xumbo lidka ku ah filim xumbo jumlada jumlada ah filim xumbo u adkaysta warshad xumbo u adkaysta toos ah jumlada
Bacda xumbo-wadareedka is-dhafan ee ay soo saartay shirkaddayadu waxay buuxineysaa cilladaha ku jira bacda anti-guurto ee gudaha (bacaha badan ee xumbada xumbada ka soo baxa ee aan ahayn kuwo is biirsaday, way fududahay in la daadiyo muddo dheer ka dib, iyo waxqabadka ka-hortagga naxdinta-ka-hortagga sabool ah). Badeecadu waxay leedahay qaab-dhismeed laba-lakab ah: Filimka tabinta PE ee dibadda ah, qiimaha caabbinta dusha sare waa 108 ~ 1010'Ω, Lakabka gudaha ee bacda xumbo ka-hortagga ah, qiimaha caabbinta dusha sare waa 108 ~ 1010'Ω.
Dharka Xumbada Cas, Mashiinka Maaskaro Wejiga, Soo-saaraha Maaskaro, Maqaarka Xumbada Xakamaynta, Mid Ka Mid ah Jiidka Mashiinka Maaskaro, Baakadaha Xumbada Baakadaha,